Cur जिज्ञासु वाइन लेबल | क्रिएटिव अनलाइन
व्यक्तिगत रूपमा, म वाइनको बारेमा धेरै बुझ्दिन, मलाई थाहा छ यदि मलाई वाइन मन पर्छ वा मलाई यो मनपर्दैन र साथै सेतो वाइन माछा वा समुद्री खानाको लागि हो र रातो रक्सी मासुको लागि हो। र अब सम्म म वाइन को मेरो ज्ञान।
यसैले गर्दा जब म सुपरमार्केटमा जान्छु र नयाँ मद्य खोज्छु, म लेबल हेरेर हेर्छु र सम्भवतः ती कारणहरूमध्ये एक हो (मूल्यको साथ, निश्चित) यसले मलाई एक वाइन वा अर्को खरीद गर्छ।
किन आज म तपाईं बारे कुरा गर्न चाहन्छु Wine वाइन लेबल जिज्ञासु कि मैले सुपरमार्केटमा वा डिजाइन ब्लगहरूमा देखेको छु।
गुलाबी चश्मा: लुक्वेंमुर्क डिजाइनरको रूपमा लुक्स पायकुटको नेतृत्वमा पोल्याण्डको एक रचनात्मक डिजाइन स्टुडियो हो यी मूल रक्सी बोतलहरु को डिजाइन को आरोप मा। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, बोतलमा बाहिर चस्मा छापिएको छ जसको माध्यमबाट तपाईं विश्वलाई गुलाबी रंगमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बोतलका लागि विभिन्न चश्मा डिजाइनहरू छन्।
लाजरस वाइन प्याकेजिंग कोटीमा Laus २००us पुरस्कार प्राप्त भयो। उनीहरूको सन्देश सम्पूर्ण विश्वमा प्रसारित गर्न, बौड स्टूडियोका डिजाइनरहरूले ब्रेल प्रणालीका फारामहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गरे जसले उनीहरूको उच्च-अन्त र विशेष मदिरा बनाउँदछन्।
होल्ड गर्नुहोस् र होलो यो एक रक्सी हो जसको लेबल, अर्सी जुहोज द्वारा डिजाइन गरिएको, शानदार छ। यो एक लोचदार सिलिकॉन फ्लोरोसन्ट कभर हो जसको फिनिशले यसलाई समात्न सजिलो बनाउँदछ। अक्षरहरू थ्रीडीमा बनाइन्छ र हामी तिनीहरूलाई दुई र colorsहरूमा, गुलाबी र हरियो फेला पार्न सक्दछौं।
पेडरन कस्तूरी: पिक्सेलार्ट स्टुडियो यस रमाईलो लेबलको डिजाईनको जिम्मामा थिए जुन चित्रणहरूमा हास्य चित्रको सम्झना दिलाउँछ र पचासको दशकका हास्य पात्रहरूबाट प्रेरित हुन्छ।
दायरा भित्र: डायलोगा एस्टुडियोको नाचो एस्क्रिबानो यी रमाईलो र शानदार लेबलहरूको डिजाईनको जिम्मामा छन्। यसले मलाई आकर्षित गर्छ कि हामी कसरी परम्परागत र आधुनिक बीचको मिलन देख्छौं। म तिनीहरुलाई माया गर्छु!
तिम्रो के बिचार छ? के तपाईंले ती देख्नुभयो?
निश्चित गर्नुहोस् रक्सी महान छ तर अहिलेको लागि हामी यसका लेबलहरूको साथ बाँकी छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » Cur जिज्ञासु वाइन लेबल